Aqoonkaab Nooca suxuurta ayaa sabab u ah heerka firfircoonida qofka ee maalinimada soonka | Aqoonkaab
Nooca suxuurta ayaa sabab u ah heerka firfircoonida qofka ee maalinimada soonka
Jun 24, 2015Arrimaha islaamka, Caafimaadka
Sida uu inoo sheegay nebigeennii Muxammed (SCW), suxuurta waxaa ku jira barako, waana ay fiican tahay in qof kasta oo soomayaa uu sii suxuurto, weliba suxuurta aad u dib dhigo.
Muddo aad u dheer ayaa xeel-dheerayaasha caafimaadku ay wadeen daraasado kala duwan oo ay ku eegayaan suxuurta iyo faa’idooyinka ay caafimaadka u leedahay, kuwaas oo midiba midda ay ka dambayso soo saarto faa’idooyin aad u badan, laakiin dhinaca kalana nooca cunto ee suxuurta uu qofku qaadanayo ayaa saamaynt taban ama togan ku yeelanaysa xaaladda caafimaad ee qofka, u adkaysigiisa soonka iyo weliba firfircoonidiisa muddada uu af xidhan yahay. AQOON KAAB waxa uu qormada maanta ku eegayaa cuntooyinka suxuurta noqon kara ee ay xeeldheerayaasha caafimaadku sheegeen in ay u fiican yihiin caafimaadka, qofkana ka ilaaliso harraadka, madax xanuunka iyo in miisaanka jidhkiisu uu kordho.
1. Waxa ay khubarada caafimaadku xaqiijiyeen in cuntada suxuurtu ay si weyn uga qayb qaadato korodhka miisaanka, sababta ay uga duwantahay afurka cuntada la cunaana ay tahay in xilliga afurka uu jidhku si dhaqso ah u gubayo cuntada uu qofku cuno maadaama oo uu u baahan yahay tamar ka caawisa soo ceshiga firfircoonidii jidhka. Sidaa awgeed haddii cuntada uu qofku ku suxuuranayaa ay noqoto mid dufanku ku badan yahay, waxaa sii kordhaysa khatarta kordhinta miisaanka ah ee uu leeyahay, gaar ahaan marka qofku uu isla marka uu suxuurto toos u seexdo.
2. Ku dadaal in biyaha aad markiiba cabbaysaa ay noqdaan kuwo xaddigoodu dhex dhexaad yahay, si tartiib ahna aad u cabto, biyo badan oo aad hal mar qudh-qudhisaa waxa ay keeni kartaa in ay si kedis ah caloosha ugu dhacaan, taasina waxa ay khatar ku tahay caafimaadka. Sida ugu fiicanina waa in waqtiga u dhexeeya afurka iyo suxuurta, halkii saacba aad cabto hal koob oo biyo ah.
3. Iska jir isticmaalka dhanaanka badan iyo cuntooyinka ay milixdu ku badan tahay, sida kajabta. Dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen in milixda, khalka iyo cuntooyinka dhanaanku ku badan yihiin ay sababaan in jidhku uu kaydsado biyaha iyo dareerayaasha kale si uu u waajaho xaddiga maadadda Sodium ta ah ee soo gashay, taasina waxa ay sababtaa in miisaanka qofku uu si xawli ah u kordho.
QORE:CABDILAAHI CABDI MUUSE(ILKACASE)
Previous Postfree download camtasia studio 8 with key Next PostHA KU AFURIN CABBITAAN AAD U QABOW, SHAAHA IYO BUNKANA 2 SAAC KA DAMBAYSII AFURKA